नीलकण्ठ नगरपालिकाले वडा–वडामा गएर भेटेरिनरी सेवा प्रवाह गर्छः सुवास खतिवडा
मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८ ०७:३२:२३ युनिकोड
आईतबार, असोज १७, २०७८ Dhading Sanchar
नीलकण्ठ नगरपालिका पशु पन्छी विकास शाखाका नायव पशु प्राविधिक सुवास खडिवडासँग पशु पन्छी विकास शाखाले गरिरहेको गतिबिधी,शाखाबाट प्रवाह भएका सेवाहरु लगायतको विषयमा रामकुमार थापाले गर्नुभएको कुराकानीको अस्मिता पोख्रेलद्धारा सम्पादित अंशः
१. नीलकण्ठ नगरपालिकाको पशुपंक्षि विकास शाखाले के गरिरहेको छ?
१५ औँ रेबिज दिवस नेपालमा पशुपन्छीको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुले रेबिज सप्ताह कार्यक्रम मनाएका छन्।हामीले एक हप्ता अगाडि देखि नारामा तथ्य र त्रसीत नहौँ रेबिaजमा बुझनु पर्ने कुरा छ । रेबिज कुकुरको टोकाइबाट मात्र हुन्छ भन्ने जनमानसमा छ। रेबिज विभिन्न जङगली जनावरबाट पनि सर्ने गरेको तथ्याङक पाइन्छ ।
९९ प्रतिशत कुकुरको टोकाईबाट रेबिज बढि फैलिएको देखिन्छ। बादर, मुसा, फ्याउरो, स्याल, चमेरो र जङगली जनावर र त्यही प्रजातिका जिवहरुबाट विशेष रेबिजको प्रकोप फैलिएको इतिहासमा र अहिले पनि देख्न सकिन्छ। भेटेरिनरीको विभिन्न सेक्टरमा विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरु हुन्छन् जस्तै कृषिमा धान दिवसमा दिवसीय कार्यक्रम मनाइरहेका हुन्छन् ।
दिवसीय कार्यक्रमहरु विश्व रेबिज दिवस, विश्व भेटेरिरनरी दिवस, अण्डा दिवस र दुध दिवसको लागि २ लाख रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यही अन्तरगत रहेर हामीले एन्टी रेबिज भ्याक्सिनहरु निशुल्क रुपमा व्यक्तिले पालेको जुनसुकै कुकुरलाइ साप्ताहिक कार्यक्रममा लगाएका छौँ भने अरु समयमा पनि यो शाखाबाट रेबिजको भ्याक्सि उपलब्ध गराइरहेका छौँ।
२.विषेश गरी डुलुवा कुकुरको टोकाईबाट लाग्छ भन्नुभयो,हामीले त्यस्ता कुकुरहरुलाई पनि एन्टी रेबिजको भ्याक्सिनहरु दिइराखेका छौँ होइन ?
हामीले बजारमा भएका कुकुरलाई सामुदायिक कुकुर पहिचान र एन्टी रेबिज खोप निशुल्क वितरण गर्ने र त्यसै कुकुरलाई आन्तरिक परजिवि र वाय परजिविको औषधिहरु पनि हामीले गत वर्ष २४० वटा बजारका कुकुरहरुलाई र रातिमा टल्कने बेल्ट बानेर छोडेका थियौँ। यसपालि नगरपालिकाले खोप खरिद तथा व्यवस्थापन भनेर ६ लाख रुपैँया बजेट बिनियोजन गरेको छ । यसलाई बजार मात्र होइन गाउँसम्म पनि यो अभियानलाई लेर जान सक्यो भने सजिलो हुन्छ ।
पोहोर हामीले २ लाख रुपैँया विनियोजन गरेका थियौँ । त्यो हामीले खर्च ग¥यौँ त्यसको राम्रो उपलब्धि पनि भयो किनभने मान्छे त्रसित हुनबाट जोगिए । मान्छेको त्रासलाई पनि न्युनिकरण गर्नको लागि सहजिकरण गर्ने हिसावले र हाम्रो पेशा त्यही भएको कारणले एउटा स्वास्थ्यको हिसावले कुकुरलाई मार्न पाउने अधिकार छैन ।
मा¥यो भने कानुन लाग्छ हामीले कुकुर मार्न दिदैनौँ सकिन्छ भने बन्ध्याकरण शिविर संचालन गर्ने यो भन्दा २ वर्ष अगाडि धादिङमा बन्ध्याकरण शिविर गरेका थियौँ । हामीले नियमित रुपमा निरन्तरता दिनको लागि पहल गर्दैछौँ । गत वर्ष बजार क्षेत्रलाई लक्षित गरेर भएको थियो भने अहिले गाउँसम्म जाने निर्णयले गाउँतिर भएका सामुदायिक कुकुरहरुलाइ पहिचान गर्दै त्यस्ता कुकुरहरुबाट एन्टि रेबिज भ्याक्सिन दिएर रेबिज नियन्त्रण गर्नको लागि बजेट विनियोजन भएको छ । भेटेरिनरी,कृषिको क्षेत्रमा नगरपालिकाको राम्रो प्रतिक्रिया छ ।
३. रेबिज हेर्दा सामान्य भएपनि केही पनि हुँदैन भनेर हेलचेक्राइ गर्दा मान्छे मर्ने रहेछ ?
रेबिजको विभिन्न अवस्थामा विभिन्न चरण हुन्छ । मान्छेको घाँटिभन्दा माथिको भागमा टोक्यो भने त्यस्को रोग सराईको अवधि दिमागसम्म गएर चाडो अवस्था हुन्छ भने शरीरको कम्मर मुनिको भागमा टोक्यो भने दुई चार महिनासम्म लक्षण नदेखीने अवस्था हुन्छ । कुकुरले टोक्नै पर्छ भन्ने छैन त्यसको ¥यालबाट सर्न सक्छ ।
कुकुर रेखदेखको लागि कुकुर आवश्यकता र महत्व पनि छ। २ सय रुपैँयाको भ्याक्सिन लगायो भने वर्षदिनभरी ढुक्क हुन सकिन्छ । टोक्ने वित्तिकै जति सक्दो चाँडै भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एक डोज मात्र लगाउने भ्याक्सिनहरु छन् । भ्याक्सिन लगाएको २५ दिन भित्रमा टोक्यो भने डराउन पर्छ किनभने भ्याक्सिनले काम गर्ने अवधि हुन्छ ।
भ्याक्सिन लगाएको कुकुरले टोकेको छ भन्दैमा भ्याक्सिन नलगाइकन बस्ने सल्लाह दिदैनौँ। बाहिरबाट लेराएको भ्याक्सिनहरु हुन्छ भ्याक्सिन लगाएको कुकुरले टोके पनि मान्छेले अनिवार्य भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेलचेक्राइ गर्दा मानवीय क्षेति हुनसक्छ । यो घातक रोग पनि हो ।
४. पशुपन्छी विकास शाखाबाट प्रवाह हुने सेवाहरु के के छन् ?
यो शाखामा एक जना मात्र स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ । एक गाउँ एक प्राविधिक अन्तरगतको दुई जना प्राविधिक चौथो तहका छौँ । यो शाखामा अधिकृत हुनुहुन्न । हामीले वार्षिक रुपमा डेढ करोड सम्मको कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौँ । हाम्रो शाखाबाट पशुपन्छीहरुको सेवा प्रवाह गर्दै गर्दा तुरुन्त भएको घटनाहरु हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा बच्चा पाउन नसक्ने, घाउ, चोटपटक लागेको यस्तो सुन्ने, खबर आउने वित्तिकै हामी फिल्डमा गएर समस्या समाधानको लागि र अरु समयमा शाखाबाट सेवाहरु दिरहेका हुन्छौँ । सामान्यतया हामीले किसानहरुलाई नाम्ले, जुकाको औषधिहरु, आन्तरीक परजिवि, वाय परजिवि त्यसैगरी भिटामिन मिनरलसहरु उहाँलाहरुलाई सेवा दिए वापत नगरपालिकालाई आम्दानीको श्रोत बाख्राहरुको लागि ५ रुपैँया, भैँसीहरुको लागि १० रुपैँया गरी छुट्टाएका छौँ । १० रुपैँयाको टिकट काटेर किसानहरुले ७/८ सय बरारबरको औषधि निशुल्क पाउनु हुन्छ ।
व्यवसायीक किसानहरुलाई के के खुवाउने भनेर थाहा हुन्छ तर सामान्य किसानलाई थाहा हुदैन । व्यवसायीक किसानलाई आवश्यकता हेरेर फलानो सामान किनेर खुवाउनुस भन्छौँ,सामान्य किसानलाई उसको अवस्था हेरेर प्राथमिकताका आधारमा उहाँहरुको आर्थिक अवस्थाको हिसावले भिटामिनहरु उपलब्ध गराइरहेका हुन्छौँ।हामी २४ सै घण्टा तत्पर छौँ किसानहरुले बोलाएको खण्डमा पुग्छौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरु लेराएका थियौँ ।
कुनै ठाउँमा विवाद नभैकन प्रक्रिया पुरा गरेर सुचना निकाल्यौँ । सुचना निकाल्नु भन्दा पहिला माग संकलन गर्छौँ,बजेटको निर्धारण गछौँ, हामीले कोठामा, शाखामा बसेर होइन कि फिल्डमा गएर उसको आवश्यकता कति हो त्यो आबश्यकता हेरेर १२२ वटा आधुनिक टाट्नो, ५९ वटा ३ हर्ज पाओरका घाँस काट्ने मेसिन वितरण ग¥यौँ ।
यो आर्थिक वर्षमा ल्याबको सुविधाहरु दिन्छौ । ल्याब परिक्षण गरेर मात्र उपलब्ध गराउन पहल गर्दै छौँ । टाट्नोको किसानहरुबाट राम्रो प्रतिकृया आएको कारण निरन्तरता दिनको लागि यो वर्ष पनि १० लाखको कार्यक्रमहरु राखेका छौँ । लगभग २ सयलाई पुग्ने हिसावले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ ।
किसानहरु हाम्रो सम्पर्कसम्म आउन, सेवा प्रवाह गर्न अलि कम भएको हो कि भनेर महिनाको १४ दिन वडाबाट भेटेरिनरी सेवा दिने त्यहाँ जादा हामीले एकपटक एउटा वडामा ११ हजार मुल्य बराबरको औषधिहरु लिएर जान्छौँ। त्यसको लागि २० लाख रुपैँया बजेट विनियोजन भएको छ । असोज महिनाबाट नियमित रुपमा वडामा एकचोटि भेटेरिनरी सेवा दिन्छौँ र सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया राख्छौँ ।
५.वडाबाट कस्तो कस्तो सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य छ ? के के सेवाहरु दिन्छौँ ?
त्यहाँ गएर एउटा सरसफाइको सन्देश दिने, किसानहरुलाई सचेतना दिने हो । किसानले लगेर प्रयोग गर्न सक्ने खालको सेवा दिने र व्यवसाय दर्ता गर्न सिफारिस गर्नको लागि सहजिकरण गरिदिने, किसानहरुले अन्तरक्रिया गर्ने १४ दिन वडामा हुन्छौँ, १६ दिन शाखामा हुन्छौँ । जनशक्ति थोरै भएपनि पहल गछौँ ।
६. समुदायमा पशु स्वास्थ्यका विषयमा कत्तिको जानकार छन् ?
खनिज तत्व, क्याल्सियम तत्व, फस्फोरस तत्वहरु जुन हामीले दिनुपर्ने केही हदसम्म कमी भएको हिसावले त्यो रोग होइन समस्या हो । अहिले हामीले त्यो सन्देश फेसबुकतिर हाल्छौँ । नगरपालिका पशु विकास शाखा भनेर पेज खोलेका छौँ । कतिपय अवस्थामा ब्याउनेछ भने थलोको आहारको व्यवस्थापनमा हेलचेक्राइ हुन्छ ।
कुपोषण, पोषिलो तत्वको कमीको कारणले शरीरमा भएका विभिन्न हर्मोनहरुको कमी भए त्यसलाई हामीले समाधानको लागि उहाँहरुलाई क्याल्सियम, फोसफोरसको मात्रा, मिनरल खनिजहरु आफैँले बनाउन पनि सकिन्छ । खनिज ढिक्का भन्ने हुन्छ जुन रातो माटो, आयोडिन नुन, अण्डाको बोक्राहरु प्रयोग गरेर गाउँघरमा बनाउन सकिने चिजहरुबाट पनि हामीले जोगाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छु ।
समस्या भइसकेको घरलाई ब्याउन भन्दा अगाडि वा ब्याइसकेपछि पछाडि दाना पानीलाई एकमुष्ठ एकैचोटि दिनुभन्दा समय मिलाएर ब्याएको एक डेढ महिनासम्म अत्याधिक मात्रामा पोषिला चिजहरु ब्याएपछि, सुत्केरी भएपछि दिने प्रचलन छ त्यसलाइ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न, घटाउन सकिन्छ । दिन त दिने तर त्यस्को मात्रा घटाएर पटक पटक दिने भनेर सल्लाह दिन्छु ।
थलोको व्यवस्थापनमा अगाडिको पाटो होचो बनाउने र पछाडि उकालो बनाउने यसो गरेर बनाउदा भडालो फर्कने समस्या कम हुन्छ । यो सबै व्यवस्थापनको कमीको कारण भएको हो । व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ हामी फिल्डमा गइसकेपछि जति सक्दो छिटो त्यसलाई बचाउनको लागि अहोरात्र खट्छौँ । हामीले गरेको केशहरुमा ९९ प्रतिशत सफल छौँ ।
७.नगरपालिका भित्रका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनिहरुको पशुमा समस्या भयो, बुझन प¥यो भने सम्पर्क कसलाई गर्ने ?
सम्पर्कको लागि पशु विकास शाखामा आफै आउन सक्नुहुन्छ । सम्पर्कको लागि ९८४१५४६८०९ कासिराज रेग्मी, ९८५१०१५८५० राजेश कोइराला, ९८४३१४५३९५ सुवास खतिवडा मेरो हो । सम्पर्क गर्नुहोस् तपाइको सेवामा निरन्तर छौँ । किसानको सेवा नै हाम्रो उपब्धि हो। हामीले बिमाको कार्यक्रमलाइ पनि निरन्तरता दिएका छौँ । यो वर्ष २२ लाख रुपैँया बिमामा छुट्टाइएको छ । किसानहरुको पशु वस्तुको क्षति भए पनि रुने आधार छैन।
नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत दिन्छ र बाँकी २० प्रतिशतकोमा ६० प्रतिशत किसानले र ४० प्रतिशत नगरपालिकाले तिर्देको छ । किसानको सबै पशुहरु बिमामा आवद्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । यसपालि हामीले मासिक भेटरीेनरी सेवा कार्यक्रम संचालन गर्न अघि बढेका छौँ । यो भन्दा पहिला सबै वर्ग थियो यसपालि लक्षित वर्ग भनेर छुट्टाएका छौँ।
दलित वर्गको लागि भनेर ५ लाख र अन्य लक्षित वर्गको लागि भनेर ५ लाख ५० हजार गरेर १० लाख ५० हजार लक्षित वर्गको लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम लेराएका छौँ । त्यसमा लोकल कुखुरा वितरण कार्यक्रम गर्दै छौँ । एकल महिलाहरुको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बाख्रा वितरण पेवा कार्यक्रम यसपालि सुरुवात गर्न जादै छौँ । गाउँगाउँमा ठुला पशुहरु नियन्त्रण गर्न गारो हुने हुँदा ट्रेबिजमा पशु नियन्त्रण गर्ने घर निमार्ण गर्नको लागि बजेट मागेका थियौँ यसपालि परेको छ, प्रत्येक वडा वडामा सुरुवात गर्छौ।
८. अन्त्यमा, नगरवासीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो महामारीबाट बच्नको लागि सबै आफनो सावधानि पुर्वक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनको लागि आग्रह गर्छु । पहुँच भएका अथवा पहुँच भन्दा बाहिर रहेका किसानहरुको लागि भेटेरीनरी के हो ? पशु विकास शाखा के हो ? उहाँहरुलाई चिन्नको लागि र हामीहरु उहाँको दैनिक जिवन यापनमा हुने पशु चौपाएहरुको समस्याको लागि २४ सै घण्टा तपाईहरुको सेवामा समर्पित हुन्छौँ । हामीसँग सम्पर्क, समन्वय बढाएर अधिकभन्दा बढि सेवालाई लिन सक्नुहोस् ।
नगरपालिकाबाट भेटेरिनरी सेवालाई कोही पनि मान्छे वन्चित हुन नपरोस् । दशै नजिकिदै छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै धेरै पशुहरुको वद गरीन्छ। पशुको मासु भण्डारण गर्दा उपभोगको हिसावले स्वस्थ मासुहरु उत्पादन गरौँ।
मासु काट्दै गर्दा फेला परेका सिस्टहरुलाई कुकुरहरुबाट जोगाइदिनुहोस्। फनफनेका रोगहरु धेरै मात्रामा छन् कुकुरहरुको सम्पर्कबाट कम गर्दिनुस् । भेटेरिनरीसँगको सेवा प्रवाहको लागि हाम्रो सम्पर्कमा आईदिनुहोस्। नगरपालिकाले कस्तो प्राविधिक राखेको रहेछ उहाँहरुको सेवाबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? हामीलाई काम गर्ने अवसर र मौका दिनुहोस् । धन्यबाद!
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज १७, २०७८